Posted by မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းတယ် at 06:54
အောင်သာငယ် 15 June 2008 at 23:25
ညီမရေ လူ့ဘ၀မှာ ကြုံကြရတဲ့ ဝေဒနာတွေထဲမှာ မိခင်ကို ဆုံးရှုံးရတဲ့ ဝေဒနာဟာ အနာကျင်ဆုံးပါပဲ။ ညီမပြောခဲ့သလို ဘ၀တူတွေဆိုတော့ ထပ်တူထပ်မျှ နားလည်ခံစားမိပါတယ်ကွယ်။ အကိုလည်း အခုထက်ထိ နာကျင်နေသေးတယ်။ အကိုထင်ပါတယ် - ဒီဝေဒနာမျိုးကတော့ သေရာပါမှာလားလို့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တတ်နိုင်သမျှ ဖြေသာအောင် ကြိုးစားပါ ညီမရေ။ ကိုယ်နဲ့ထပ်တူ နားလည်မယ့်သူတွေ ရှိနေသေးတယ်လို့ တခါတခါ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ ဟုတ်လား-- ငြိမ်းအေးချမ်းမြေ့ပါစေ ညီမရေ။
ရွှေပြည်သူ 16 June 2008 at 01:42
သူငယ်ချင်းရေ မျက်ရည်တွေဝဲပြီး ဖတ်လိုက်မိတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ တရားတော်တွေကို အမြဲနှလုံးသွင်းနေတဲ့ မေကတော့ တခြားသော သာမာန်လူတွေထက် အများကြီး ပိုဖြေသိမ့်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်နေပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းပါစေ သူငယ်ချင်းရေ...
Heartmuseum 16 June 2008 at 04:22
ဘာဘာ ညာညာ သိတ်မပြောချင်တော့ဘူး။ ထပ်တူ ခံစားရတယ်... မမေရေ...
win zaw 16 June 2008 at 11:40
အကောင်းဆုံး စကားလုံးကို ရှာမတွေ့ဘူး
ဒါပေမယ့် ထပ်တူထပ်မျှ ဝမ်းနည်းမိပါတယ်လို့
Anonymous 16 June 2008 at 21:04
မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းတယ် 16 June 2008 at 21:40
ခြေရာ 17 June 2008 at 08:45
ထပ်တူခံစားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့...ပူလောင်လွန်းလို့ ဆက်လက်မဖတ်နိုင်တော့ဘူး။ အကြီးမားဆုံး နှင့် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ဆုံးရှုံးမှုပါ...ညီမရေ။
ခြေရာ 17 June 2008 at 11:25
အသံတို့ သည်ဖြစ်ပြီး ပျက်သွား ပျောက်သွား ကြပြီပဲ။ဖြစ်စဉ်ကသာ ကြားလိုက်ရပြီးနောက် ချက်ချင်းပျောက်ကွယ်သွားသော အသံကို သူ့ သဘော အတိုင်း နှလုံးမထားဘဲ အဘယ်ကြောင့် သိမ်းဆည်းပြီး စွဲလမ်းနေရမည်နည်း။အသံသည် ကြားစဉ်ခဏမျှသာ ဖြစ်၏။ ထိုအာရုံကို မိမိက သိမ်းဆည်းထားသည်မှာ မိမိ၏ အမှားသာ။
တာတူး(၀ါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက် 18 June 2008 at 01:55
မမေရေ တကယ့်ကို စိတ်မကောင်းပါဘူး ။
အမေဆိုတာ လောကမှာ တစ်ခုထဲ ရှိတဲ့ အရာပါ ။ အဲဒီတစ်ခုကို ထာဝရ ဆုံးရှုံးရတဲ့ ခံစားမှု့ကို
စာနာ နားလည်ပါတယ်ဗျာ ။အမေရဲ့ ဆန္ဒတွေကို ဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်တဲ့ သမီးဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။
BLACK DREAM 19 June 2008 at 04:55
ဘယ်လိုဖော်ပြရမှန်းမသိအောင် ထပ်တူဝမ်းနည်း ကြေကွဲ မိပါတယ် အစ်မရယ်။
ပေါက်ကရ 25 June 2008 at 17:27
အမရေ... ကျနော် လာလည်တာ နောက်ကျသွားသလို ။ ဆုတောင်းလည်းနောက်ကျသွားပါတယ် ။ အမလို သမီးမျိုးမွေးထုတ်ပေးထားတဲ. အမေ ( အမ ရဲ. အမေ ) ကောင်းရာဘုံမှာ အမ လုပ်ရပ်တွေကို ဂုဏ်ယူနေမှာပါ ။ ထပ်တူ ခံစားရပါတယ် အမ ။
cutegirl 1 July 2008 at 10:45
ကိုရင်ညိန်း4July 2008 at 02:51
M.Y.9July 2008 at 06:09
ဗုဒ္ဓဘာသာသမီး ကောင်းတစ်ယောက်ကိုလောကကြီးထဲပေးခဲ့တဲ့၊ ဝေဒနာ ကိုတရားသိ သိတဲ့ ညီမ မိခင် မြင့်မြတ်တဲ့ဘ၀ ကိုရောက်နေမှာ ပါ..
နှင်းပွင့်ဖြူလေး 20 July 2008 at 11:11
စိတ်ဆင်းရဲစရာများ အမြန်လွင့်ပြယ်ပြီး စိတ်ပျော်ရွင်ဖွယ်ရာများ အမြန်ဆုံးရောက်လာနိုင်ပါစေ မမေ။
ဂျေ 25 August 2008 at 21:11
မလာတာ ကြာလှ ပျောက်လှချည်လား
လူပျောက်တာ က ကိစ်စမရှိဘူး အိမ်လခ မပျောက်ဖို့ လိုတယ် ဟတ် ဟတ် ဟတ်
nadine 24 October 2008 at 23:28
Nge Naing 20 November 2009 at 13:23
ညီမရေ ထပ်တူထပ်မျှခံစားရပါတယ်။ ရတနာသုံးပါးကို အမြဲနှလုံးသွင်း ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေ လုပ်ပြီးအမျှအတန်းဝေပေးပြီး ကုသိုလ် လုပ်နိုင်ပါတယ်။